Qofka ku jira baxnaanada dhimirka dhaqaalahiisa | Suomen Mielenterveysseura
Qofkasta sida uu uga gudbayo nolol maalmeedkiisa waxaa qeyb ka ah xaaladdiisa dhaqaale. Haddii qofka dhimirka qaba uusan awoodin inuu shaqo qabto ama uu waxbarto, taas badelkeeda waxaa jira caawimaado kala duwan. Caawimaadahaas kala duwan akhbaartooda waxaad ka heli kartaa shabakadaha ama linkiyada dhinaca midig.
Lacagta nolosha (Toimeentulotuki) waxaa laga codsadaa xafiiska arrimaha bulshadda, mida hawl-gabkana waxaa laga codsadaa xafiiska caymiska hawl-gabka, wixii kale ee nooc caawimaad ah akhbaartooda waxaa laga heli karaa KELA. Waxaa loo baahanyahay inaad raadsato helida dhaqaalaha caawimada ee aad xaq u leedahay. Waxaa caadi ah in dadku aysan aqoon u lahayn noocyada dhaqaalaha ay xaqa u leeyihiin in ay helaan.
Haddii xaaladda noloshu ay adagtahay, codiga dhaqaalaha caawimada, lifaaqyadiisa iyo dhameystirkiisa waxaa laga yaabaa in ay adkaato. Waxaa fiican in la weydiisto shaqaalaha KELA wixii caawimo ah ee qofku u baahdo, qaasatan marka qofku codsanayo caawimada KELA waxaa shaqaalaha ayaa kaa kaalmeynaya buuxinta foomamka codsiga.
Noocyada dhaqaalaha caawimada ee caadi ahaan qofka baxnaanadu dhimirku u socoto uu heli karo waa lacag-maalmeedka bukaanka, caawimada baxnaanada, caawimada curyaamiinta ama mida hawl-gabnimada. KELA ayaa laga heli karaa tafaasiil dheeri ah oo la xiriirta noocyada caawimada kala duwan. Caawimaadaa kale waxaa kuu dheeraan kara inaad xaq u yeelato kaalmada kirada guriga.
Caawimada nolol maalmeedku waa mida ugu dambeysa ee qofku heli karo. Tan waxaa la heli karaa marka noocyada kale ee caawimadu ama dakhligu aysan qofka ku fileyn. Caawimada nolol maalmeedka waxaa laga codsadaa xafiiska arrimaha bulshadda ee deegaanka, iyadoo qoraal ahaan lagu dalbayo, sidoo kale xaq u lahaanshaha caawimadan waxay ku xirantahay hantida qofka, dakhligiisa, rasiidyada waxa soo gala iyo waxa ka baxa.
Cadadka dhaqaalaha nolol maalmeedku wuxuu ku xiranyahay shaciyan faraqa u dhexeeya waxa qofku ku noolaanayo iyo dakhliga oo gala iyo hantidiisa. Dhaqaalahan nolol maalmeedka waa mid qof walba si khaas ah loogu xisaabiyo. Waxaa haboon in qofku uu dhaqaalaha nolol maalmeedka uu u soo baahdo kaliya haddii ay u muuqato in aysan ku fileyn dhaqaalaha kale ee soo gala in uu daboolayo waxyaabaha aasaasiga u ah noloshiis.